ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ခေါင်းပေါင်းစ လူသမျှတွင်မှ...
ကောင်းတယ်ဗျာ။ မနက်ခင်းမှာ ဖွင့်လိုက်တာ မင်္ဂလာရှိသွားတာပဲ။ ဘယ်အဖွဲ့လဲဗျ။ "မြန်မာပြည်" နဲ့ "ဆိုင်းအဖွဲ့" ဆိုတာပဲ တွေ့တယ်။
Taungoo....စိန်ကျောက်စိမ်း အဖွဲ့လို့ ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ မြန်မာပြည်မြေပုံပေါ်မှာ ကျောက်စိမ်းလို့ ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့ စာလာဖတ်တာ၊ ဘာတွေ ရေးထားမလဲလို့ လာကြည့်တာ၊ ဒီနေ့ မနက်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာတော့ မနက် ၆ နာရီထဲက မဲပေးနေကြတာ ခုချိန်ထိ တဖွဲဖွဲပဲ၊ ကိုပေါတို့ရဲ့ No Vote ကြီးကတော့ လုံးဝကို မထိရောက်တာ အသိသာကြီးဗျို၊ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့တွေကတော့ အရင်လို ကြေငြာချက် တစ်ခု ထုတ်လိုက်ရင် ပြည်သူက ထောက်ခံ သယောင်ယောင် ယောင်ဝါးဝါး လုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ။ လူတွေ အကုန်လုံးက မဲပေးနေကြပြီလေ၊ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ မဲမပေးနဲ့ ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းချက်ကိုလဲ သူ့ပါတီဝင်တွေတောင် လိုက်နာဟန် မတူပါဘူး၊ အရင်ကတော့ ဒေါ်စုကြည်က ပြောရင်၊ တိုက်တွန်းရင် ပြည်သူတွေ အကုန်လုံးက သဘောတူတယ်စယောင် အမေရိကန် ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံမီဒီယာ တွေ၊ ခပ်တည်တည် ၀ါဒဖြန့်ခဲ့တာတွေ တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေ သက်သေပြလိုက်ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ မဲပေးရတာလဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလဲ နိုင်ချင်မှ နိုင်မှာပါ၊ သူတို့ကို မကြိုက်တဲ့သူတွေကလဲ အများကြီးပဲလေ၊ တစည မဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
To Mg Lann Thit,
Say nothing , till we see what happens.
Our people have their own rights!
Good Luck ( all Democratic )
To Mg Lan Thit.
Both you and your government are " Without Sought Shet " .
ရေခင်းလား၊ ရေကင်းလား။ Video clip မှာ ရေခင်းလို့ ရေးထားလို့။
ရေခင်းဆိုတာ ဘာလဲ။ အဲ့ဒီ ဗျောတီးလုံးရဲ့ ခေါင်းစဉ်လား။
မြန်မာပြည် ကျောက်စိမ်း နာမည်ကြီးတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ခုမှ သေချာ နားထောင်ဖူးတာ။
အထင်မမှားရင် (ကို)ခင်မောင်တိုး ရဲ့ သီချင်းတစ်ချို့ကို မြန်မာမှုပြုထားတာ အဲ့ဒီဆိုင်းအဖွဲ့ထင်တယ်။
ကျနော်တော့ “ရေကင်း”လို့ မှတ်ဖူးတာပဲဗျ။ ရတနာပုံနေပြည်တော်တည်တော့ ကင်းအမျိုးမျိုး ချထားတာရှိတယ်။ အဲဒီ ကင်းအမျိုးမျိုးအနက် ညဖက် ကျုံးထဲမှာ ဖောင်ကလေးနဲ့ လှည့်ရတဲ့ ရေကင်းဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ အဲသည်မှာ ရေကင်းလှည့်တဲ့အဖွဲ့က နိုးနိုးကြားကြားရှိအောင် နရီစည်းကလေး၊ မောင်းကလေး၊ စည်တို ဗုံတိုကလေးတွေ ဆောင်ပြီး တီးမှုတ်လေ့ရှိကြသတဲ့။ နောက်တော့ နှဲကလေးပါစွက်လို့ပေါ့။ သဘာကတော့ ကျနော်တို့ နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲသည်ကနေ ရေကင်း ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာလို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။
ရေခင်းဆိုတာကတော့ ဘုရင်နဲ့ နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေက ဖောင်စင်္ကြာ သို့မဟုတ် ဘုရင်စီးနင်းရတဲ့ လှေတော်နဲ့ လှေတော်သားတွေနဲ့ အစုံအလင် ခန်းခန်းနားနား သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက် လုပ်ရတဲ့ ပွဲတမျိုးလို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။ ဒီအခန်းအနားမျိုးကို စပ်ဆိုထားတဲ့ “ရေခင်းတော်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဝင်းဦး ဆိုထားတာရှိတယ်လေ။
“ဝေဇယံ ရွှေဖောင်ဗိမာန်နန်းမြင့်အလယ်၊ အဏ္ဏဝါ လူးလားထက်အောက် စုန်ဆန်တယ်၊ ရွှေဘုန်းတောက်ပ နေလနှယ်၊ ရေပြင်လယ်မှာ ပျော်စံပါယ်၊ ကမ်းညွှတ်လု ဗိုလ်ထုရာလယ်၊ ရာသက်တော်ရှည်ကြောင်းရယ်၊ ကိုယ်စီဆုချွေရင်း ရေခင်းတော်ဝယ်...” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေ။
Thanks, ko paw .
ရှင်ဘုရင်တွေအတွက် ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပတာကိုတော့ သိတယ်။
အခုလို စုံစုံလင်လင် ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါ။
ကိုပေါ ရေကင်းဆိုတာဘာလဲ ရှင်းပြပြီးမှ စိတ်ဝင်စားသွားပြီး ဗီဒီယိုကလစ်နားထောင်မိတော့တယ်
ဦးပေါရေ.. ရေကင်းနဲ့ ရေခင်းရှင်းလင်းချက်လေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲလို အနှစ်ရှိတာလေးတွေကို ဆောင်းပါးရေးရင် ကောင်းမှာပဲ။ အခုတော့ တခါလာလဲ နအဖ အတင်းအဖျင်း။ နောက်တကြိမ်လဲ အရေမရ အဖတ်မရ နအဖ အတင်းအဖျင်း။ တခါတလေမှာတော့ လက်တွေ့သုံးလို့မရတဲ့ ဒီမိုဝါဒကို ဘုန်းတော်ဖွဲ့တာလဲလုပ်ပါတယ်။ ဒီမိုဝါဒကို တကယ်လက်တွေ့သုံးလို့မရဘူးဆိုတာ ရွဲ့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီမိုဘလော့တွေအားလုံးမှာ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်မပေးတာပဲ ကြည့်လေ။ ပိတောက်မြေမှာ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ပေးတော့လဲ ဘယ်ကောင်ကများ အဆင့်ရှိရှိတုံ့ပြန်ဆွေးနွေးနိုင်ကြလို့လဲ? ဆဲဆိုပြီးပြောဆိုတာပဲရှိတယ်။ သြော်.. ကျန်သေးတယ်။ ဥပဒေအကြောင်း နကန်းတစ်လုံးမှ မသိပဲ ဒီမိုဥပဒေတွေက တရားမျှတတယ်လို့ပြောတာလဲရှိသေးတယ်။
ခင်ဗျားဆောင်းပါးတွေမှာ ဖတ်လာခဲ့သမျှ အနှစ်ရှိတာ မမြင်ဘူး။ ( ကြက်တူရွေးတွေကတော့ ကျုပ်လိုမြင်မှာမဟုတ်ကြပါဘူး။ ) အခုကော်မန့်တုံ့ပြန်မှုလေးကိုပဲ အနှစ်လို့မြင်မိပါတယ်။ နောင်မှာ အရေရ အဖတ်ရတဲ့ အနှစ်ရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေမြင်ရပါလို၏။
ဒီမိုငတုံးများဘလော့မှာ အတင်းအဖျင်းတွေပဲမြင်ရတာကို စိတ်ပျက်နေသည့်
I gotamessage with an image which is trying to say something, looks likeamodern poem after c n listen this post,thanks.
Thanks for the music n the explanation of yekinn n ye khinn.It is so good in morning especially far from home.While listening this one my memory going back to uni students' life in Mandalay.We went to face washing ceremony of MAHARMYATMUNI early in the morning:))GYIDAW